Lugood Tag: Sida loo tag Songs Your in Lugood
> Resource > Lugood > Sida loo tag Songs Your in Lugood
Maqaalkani waxa uu barayaa waxa tag Lugood, iyo sida aad u edit karaa in Lugood, ama isticmaalka dibadda Lugood tag editor.
Waa maxay Lugood Tag?
Lugood tag, oo sidoo kale loo yaqaan tag Lugood ID3 , waa metadata ama macluumaad sida artist, album, sifayn, sanad iyo wixii la mid ah. In Lugood, tags waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu guraan aad music, soo bandhigaan macluumaadka ee files ah, kala soocaan files iyo in la isticmaalo by Smart playlist.
Lugood dhisay-in Editor Tag
Tag ayeey ku Lugood waa mid aad u sahlan. Si toos ah loo muujiyo hees iyo guji mar si sixiddiisa tag mid ka mid ah. Plus, Lugood sidoo kale kuu ogolaanaya in aad xaalkaa Xog tag la editor info dhisay-ka. Si aad u helaan, xaq guji galka aad rabto in aad wax ka bedel metadata, dooro Hel Info (ama kaliya wax miiran Command + aan keyboard).
Talooyin , berrinka kooxaynta waxaa si gaar ah loo isticmaalo in lagu heeso koox u playlists firfircoon. Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa playlist ah Smart in ay curiyaan liiska in kaliya waxaa ku jira heeso la "Oldies" kooxaynta macluumaadka.
Tag Edit Songs Multiple in Lugood
Waxa kale oo aad tags heeso badan xaalkaa laga yaabaa. Waxaa la mid ah tag tafatirka ee file hal. Farqiga u dhexeeya waa in ay doortaan files kala duwan ka hor ay helaan Hel amarka Info. Waxaad qaban karto hoos u Command ama wareeg oo muhiim ah oo guji in ay doortaan files kala duwan , ama isticmaal Command + A in ay doortaan oo dhan files.
Talo : Haddii aad rabto in ay nadiifiso tag Lugood sida comment, fudud uncheck sanduuqa hor beerta text comment iyo dooran OK si aad u dalbato in files soo xulay.
External Lugood Tag Editor
The tags saxar Lugood mararka qaarkood aan la badbaadiyey in file asalka, si markaa aysan barnaamijyo kale oo ka shaqeeyaan. Oo weliba, ma ahan sida awood badan sida qaar ka mid ah tifaftirayaasha tag dibadda. Halkan yimaado tifaftirayaasha tag kale ee Lugood. Waxa aan halkan lagu talinayaa waa editor xorta ah Lugood tag loo yaqaan MusicBrainzPicard oo isticmaala hab album ku salaysan si ay u helaan database MusicBrainz in ay si toos ah si sax ah DEAD files music aad.
Halkan waa Lugood tag editor kale oo bannaanka ah, kaliya doorasho fiican. Waxaa si toos ah u aragto macluumaadka loogu talagalay files music oo dhan, iyo waxay ka caawisaa nadiifinta maktabadda Lugood aad by si qamaar loogu heeso mislabeled oo ay ka saareen tus. Baro More >>